नेपाली जनतालाई अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराएर जु्गौँजुग राष्ट्रवादी बन्ने अवसर
Monday, 11 Nov, 2019 5:56 PM
नेपाली भूमी लिम्पियाधुरा, र कालापानी लगायत दर्जनौ ठाउँमा भारतीय रबैया र उसले गरेका mअतिक्रमणले सबै नेपालीको मन दुखाएको छ । भर्खर स्कुल पढ्न जाने बच्चाले कक्षा ३ मा नै बलभद्र कुवँर, अमरसिंह थापाहरुको विरताको पहिचान पढ्ने नुतन मस्तिष्कले पनि कालापानी विर पुर्खाहरुले कसरी जोगाएका थिए भनेर पढ्छन् । तिनै नुतन मस्तिष्क बस्यक हुँदा आफ्नो भूमि लुटिएको र वर्तमान शाशक त्यसका साक्षी जस्तो गरी चुप देख्दा मुलुकको स्वाभिमानको वास्तविक अवस्थाबारे दिल दुखाउन बाध्य छन् । आज त्यहि कालापानी अनेक जालझेल पूर्ण तरिकाले आफ्नो बनाएर भारतले कब्जा गरिरहेको छ ।
कहाँ पर्छ नेपाली भूमि कालापानी ?
कालापानी नदी नेपालको सुदूर पश्चिममा पर्छ । यस नदीको पश्चिममा भारतको उत्तराखण्ड राज्य पर्दछ। यस कालापानी क्षेत्रले ४ लाख ४४ हजार रोपनी क्षेत्रफल क्षेत्र ओगटेको छ। बि.स. १८१६ मा नेपाल र ईष्ट ईन्डिया बिच भएको सुगौलि सन्धीले नेपालको पक्षिम सिमा महाकाली नदीलाई बनाएको छ ।
नेपाल–भारत दुवैतिर ‘ब्यास’ भनिने महाकाली नदीको उपल्लो उपत्यकामा नेपालका नौ गाउँ अवस्थित् छन् । यी गाउँमा ६ महिना हिउँ पर्नेहुँदा त्यहाँका बासिन्दा हरेक साल बेसीतिर झर्ने गर्छन् । कैलाश पर्वतदेखि दक्षिणको ब्यास उपत्यकाको वर्णन कैलाशखण्ड महात्म्य, नेपालखण्ड महात्म्य, उत्तराखण्ड महात्म्य र स्कन्दपुराणमा पनि छ । प्राचीनकालदेखि नै कैलाश र मानसरोवर जाने बाटो भएकाले ब्यासलाई स्वर्ग जाने बाटोका रूपमा पनि लिइन्छ ।
अपी, नम्पा र सैपाल हिमालको उत्तरमा छ, ब्यास । ऐतिहासिक युरोप–चीन ‘सिल्क रोड’ ब्यास उपत्यकाको उत्तरी सीमामा पर्ने तिब्बतको पुराङ्ग काउण्टीहुँदै गएको थियो । उहिले पुराङ्ग काउण्टीको व्यापार मण्डी ताक्लाकोटबाट नेपाल र भारत प्रवेश गर्न लिपुलेक भञ्ज्याङ्ग प्रयोग हुन्थ्यो । यही भञ्ज्याङ्ग भएर परम्परागत नेपाल–भारत हिमालपार व्यापार हुन्थ्यो । नेपाल–तिब्बत आउजाउका लागि १० हजार ८५० फिटको लिम्पियाधुरा, १७ हजार ४०० फिटको लेलोङ्ग र १६ हजार फिटको तिङ्कर भञ्ज्याङ्ग भन्दा १६ हजार ८०० फिटको लिपुलेक बढी चल्तीको नाका थियो ।
भारतको छेतो हुँदै पुग्न सकिने व्यास गाविसमा अहिले छाँगरु र तिङ्कर गाउँ मा मात्र बस्ती छ । छेतोमा भारतीय सेनाको एक गुल्म र अर्ध–सैनिक बल एसएसबीको टुकडी तैनाथ छ । तोभन्दा माथि ‘नोटिफाइड’ इलाका पर्ने हुँदा धार्चुलाको सब–डिभिजनल मजिस्टे«टबाट विशेष अनुमतिपत्र लिएर मात्र आवतजावत गर्न पाइन्छ । छेतो काटेपछि भारतकै गब्र्याङ्ग गाउँ आउँछ । भारतको उत्तराखण्ड राज्यअन्तर्गत पिथौरागढ जिल्लाको धार्चुला र नेपालको दार्चुला जिल्लाको व्यास गाविसमा विभिन्न थरका ब्यासीहरू छन् ।
यस क्षेत्रमा शताब्दीयौंदेखि बस्दै आएका ब्यासीहरूले लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदीलाई काली र अहिले भारतले कालीनदी भनेर दाबी गरेको नदीलाई ‘खा यंक्ति’ भन्छन् । तर पछिल्ला दशकमा भारतले ‘खा यंक्ति’लाई काली र ‘तिल्सी’लाई कालापानी भनेर स्थापित मात्र गरेको छैन कब्जै जमाएर बसिरहेको छ ।
यसरी कब्जा गर्यो भारतले
भारतले अहिले भन्दै आएको कालीनदी र कालापानी वास्तवमा क्रमशः खा यंक्ति (नदी) र तिल्सी हो ।
मार्च १९५९ मा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा भारत निर्वासित हुनुअघिसम्म ब्यास उपत्यका र सीमावर्ती भारतीय गाउँहरूबीच राम्रो सम्बन्ध तथा स्वतन्त्र आवागमन थियो । खेतीपातीमा काम गर्नेदेखि बौद्ध तीर्थयात्रीसम्मका तिब्बतीहरू नेपाल र भारत दुवैतिर डुलेर फर्किन्थे । दलाई लामाको पलायनपछि यसमा केही दरार सुरु भए । लुक्दै–भाग्दै भारत पस्ने तिब्बतीले लिपुलेक र तिङ्कर भञ्ज्याङ्ग प्रयोग गर्न थाले, जसमा नेपालले कुनै चासो देखाएन भने भारतले निरन्तर आफ्नो निगरानी बढायो । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि अवस्था झन् बिग्रेर गयो ।
त्यसबेला पंकौवामा गुन्जी र एरखा तथा पंखामा गब्र्याङ्गवासीका खेतहरू थिए । बाली लगाउने र उठाउने समयमा गाउँलेहरू त्यहीँ बस्थे । तिल्सीमा चट्टानमुनि पानीको सानो मूल थियो । यात्रीहरू त्यहीँ तिर्खा मेटाउँथे र स्थानीय परम्पराअनुसार ढुङ्गामाथि ढुङ्गा थपेर हिँड्थे । अहिले त्यहाँ भारतीय फौज अतिक्रमण गरेर बसिरहेका छन् । स्थानीय बासिन्दाले १९६२ मा भारत–चीनबीच लडाईं हुने भएपछि यस क्षेत्रका ठाउँ–ठाउँमा बङ्कर खन्दै भारतीय फौज परिचालित भएको देखेका थिए भन्ने विभिन्न सन्दर्भ सामाग्री भेटिन्छन् । १९६५ सम्म यस भेगमा नेपालीको आवतजावतमा बन्देज पनि भएन । तर त्यसपछि, भारतीयहरू तिब्बत जान छाडेसँगै, नेपालीहरूको आवतजावतमा पनि बन्देज लगाइयो । स्थानीयवासीले थुप्रै पटक गुनासो गरे पनि नेपाल सरकार मौन रह्यो । जसले गर्दा त्यो भूमि लट्न नेपालले मौन समर्थन दिएको भान पर्दै गयो ।
कुटी गाउँभन्दा माथि प्राचीनकालदेखि प्रसिद्ध ज्योलीकाङ्ग अर्थात् पार्वतीताल र काली मन्दिर छन् । लिम्पियाधुराबाट निस्कने पानी पार्वतीताल हुँदै कालीनदीमा आउने विभिन्न् सन्दर्भ सामाग्रीमा अहिलेपनि पढ्न पाइन्छ । कालो चट्टानबाट कालीनदी निस्किन्छ भन्ने स्थानीय किम्बदन्ती छ । लिम्पियाधुरानिर हिमाच्छादित पर्वत छ, जसलाई ‘छोटा कैलाश’ भन्ने गरिन्छ । कैलाश मानसरोवर जान नसक्नेहरू यसैको दर्शन गर्छन्, पार्वतीतालमा नुहाउँछन् र काली मन्दिरमा पूजा गर्छन् ।
अहिले कुटी र पार्वतीतालमा बाह्रै महिना भारतीय फौज बस्छ । गुन्जी गाउँनिरको मनिलाथाङ्गमा भारतले विभिन्न सरकारी कार्यालय बनाएको, हेलिकप्टरबाट निर्माण उपकरण पु¥याएको र यस क्षेत्रमा सडक निर्माण तीव्र बनाएको छ । तर, यसबारे नेपाल सरकारले कहिल्यै आफ्नो मौनता तोडेन । लिम्पियाधुरा कालीनदीको उद्गमस्थल निर्धारित हुँदा कुटी, नाबी र गुन्जी नेपालमा पर्छन् । यी तीन गाउँका बासिन्दाले नेपाल सरकारलाई तिरो तिरेको प्रमाण अझै छ । यी गाउँमा गएर जनगणना गर्ने व्यक्ति अझै छन् ।
सरकारले आट्नुपर्यो : प्रमाण देखाएए फिर्ता गर्न कुनै समस्या छैन
नेपाल सरकारले चाह्यो भने पुराना अभिलेख केलाएर तथ्य एकीकृत गर्न सक्ने हो भने अहिलेपनि त्यो भूमि फिर्ता लिन सकिने इतिहाँसकार र परराष्ट्रमामिलाका जानकार बताउँछन् । सरकारी स्तरबाट प्रयास गर्ने र अन्तराष्ट्रिय अदालतबाट त्यो भूमि अहिलेपनि फिर्ता ल्याउन सकिन्छ , तर त्यसका लागि राष्ट्रिय संकल्प र एकता आवश्यक छ । भारतले नयाँ नक्सा सार्बजनिक गरेसँगै
सबै दल र नाकगरिकले सरकारलार्य दह्रोसँग कुरा राखेर भूमि फिर्ता ल्याउन साथ दिइरहेका छन् । सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएको कालीनदीको उद्गम अहिले भन्ने गरिएको कालापानी होइन, कुटी हो भन्ने पुष्टि गर्न नेपालसँग भएका प्रमाण यथेष्ट भएको इतिहाँसकारहरु बताउँछन् ।
भारतले ‘खा यंक्ति’लाई कालीनदी भन्ने गरे पनि तिल्सी पुगेर पानीको मात्रा हेर्नासाथ त्यो झुटको खेतीको पर्दाफास भइहाल्छ । पानीको नमुना जाँच्न सकेमात्र पनि भारतले झुटको खेती गरेर नेपाली भूमि लुटेको हो भन्ने आधार प्रष्ट हुन्छ । त्यहाँको अनुपम प्राकृतिक उपहार ‘ॐ’ पहाडलाई आफ्नो भूभागमा पार्न पूर्वपट्टि रेखाङ्कन समेत गरेको भारतले तिल्सीको मूल थुनेर सानो कृत्रिम ताल बनाएको छ । लिम्पियाधुराबाट निस्कने पानी पार्वतीतालहुँदै कालीनदीमा बगेको स्थानीयवासीको भनाइ विपरित तिल्सीको मानवनिर्मित तालबाट कालीनदी बनेको देखाउन यो काम गरिएको हो । तिल्सीमा पार्वतीतालमा जस्तै काली मन्दिर पनि बनाइएको छ ।
भारतले गब्र्याङ्गबाट कालीनदीको पश्चिम किनाराहुँदै रोङ्गकाङ्ग र नपल्च्यु गाउँ जाने बाटो १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि खनेको हो । त्यसअघि भारतीयहरू नेपालको बाटो हुँदै ‘खा’ नदीको पुल तरेर जान्थे । तिब्बत जाने भारतीय व्यापारी र तीर्थयात्रीहरूको अनुगमन तथा कागजात तयार गर्न अहिले पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने मनिलाथाङ्गमा भारतीय सरकारी कार्यालयहरू बनाइएको छ, जबकि सुगौली सन्धि अनुसार यो नेपाली भूमि हो । अब नेपाल सरकारले ‘लिपुलेक भञ्ज्याङ्ग त्रि–देशीय सिमाना बिन्दु होइन भन्न सक्नुपर्ने भएपनि नेपालले मौनता नतोड्दा भारत झनै हावी भइरहेको छ ।
ओली राष्ट्रवादको असली अग्नीपरिक्षा, अतिक्रमित भूमी फिर्ता ल्याएर युगपुरुष बन्ने अवसर
नेपालको राजतन्त्र होस् या गणतन्त्रका अहिलेका प्रधानमन्त्रीहरु, भारत परस्त आरोप लाग्ने बाबुराम भट्टराई देखि राष्ट्रवादी छवि बनाएका भनिएका केपी ओली अहिलेसम्म कसैले मुख खोलेनन् लुटिएको नेपाली भूमिको बिरूद्धमा । भारतसँग सुरूङ युद्ध लड्नु पर्छ भन्ने प्रचण्ड देखि शेरबहादुरमात्र होइन कुनै नेपाली शासकले गंभिर ढंगले कुरा उठाएनन् । बरू भाचरतलाई खुसी बनाएर आफ्नो शासनसत्तालार्य सहज बनाउने बाटोमा लागिरहे । परिणामस्वरूप भारतीय हेपाहा प्रवृतिथ बढ्दै गयो र नेपाली भूमि अतिक्रमण हुँदै गयो । राजा महेन्द्रदेखि अहिलेका केपी–पिके गठबन्धनसम्म् आइपुग्दा कहिल्यै, कसैले आफ्नो अतिक्रमित भूमिको बारेमा मुख नखोल्ना अहिलेको अवस्था आएको हो ।
यतिबेला भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला खुट्टा नकमाएको भन्दै राष्ट्रवादी छवि बनाएका उनै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् । नाकाबन्दकिा बेला जनताले साथ दिएका कारण सफल भएका ओलीलाई अहिले पनि जनता र सबै पार्टीले एक मत भएर साथ दिएका छन् अतिक्रमति भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि । ठुलो आशा बोकेर दुईतिहाइको बलियो सरकार बनाइदिएका जनताले ओलीको असली राष्ट्रवादको परिक्षण गरिरहेका छन् । बलियो सरकारले भारतसामु खुट्टा नकमाइकन आफ्नो अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याएमा ओलीबाट त्यहाँभन्दा बढि आशा राख्दैनन् । उनलाई जुगौँ जुग नेपालीले सम्झनेछन् । अतिक्रममित भूमि फर्काएर जुगौँ जुग राष्ट्रवादी नेताको उपमा पाउने ओलीका लागि यो महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । आम जनता, सबै राजनीतिक दलले साथ दिएका बेला ओली नेतृत्वको सरकारले दरिलोसँग आफ्ना तथ्य, प्रमाण राखेर अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि ठुलो अवसर छ ।